Uqoqosho lwaseKhaya-Uhlaziyo oluhlaza oluhlaza | Ukuhlaziywa okuGreen (iphepha 2)
Iinjini zomoya ezizenzele zona
Kule nqaku siza kufundisa indlela yokwakha i-injini yomoya eyenzelwa ikhaya lethu. Ukuba ufuna ukufunda konke ngayo, ngena apha.
Isicoci samanzi sinceda ukuba usele amanzi etepu simahla kwintsholongwane kunye nezinye iintsholongwane eziyingozi. Funda ngako konke apha.
I-chronothermostat ivelise imisebenzi ephucula umgangatho wokufudumeza ekhaya. Fumana konke malunga nayo apha.
Buyintoni ubushushu obuhlaza okwesibhakabhaka?
Ubushushu obuhlaza okwesibhakabhaka ngumba weendlela zokuthengisa ezininzi kumaxesha abandayo. Funda ngako konke kweli nqaku.
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nokukhupha ubushushu
Ukukhupha i-Thermal lukhetho olufanelekileyo lokufudumeza kula magumbi sichitha ixesha elininzi kuwo. Fumanisa izibonelelo zayo apha.
Indawo yokubeka iimpahla zombane
Umtya wempahla yombane unika izibonelelo ezininzi ngaphezulu kwesiko. Funda onke amanqaku kunye nendlela asebenza ngayo apha.
Yintoni izihlanganisi zobushushu kwaye zisebenza njani?
Ukugcina ukufudumeza, izixhobo zokufudumeza ubushushu zezona zifanelekileyo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ziyintoni kwaye zisebenza njani? Yonke into enxulumene apha.
Ipeyinti ye-Thermal yinto eguqukayo kwihlabathi lokugquma. Ngaba uyafuna ukwazi zonke iipropathi kwaye zisebenza njani?
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neebheyili zerhasi yendalo
Esi sithuba sithetha malunga nokuba zeziphi iibhoyili zerhasi yendalo kunye nendlela ezisebenza ngayo kunye neentlobo ezahlukeneyo ezikhoyo namaxabiso azo. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Iinkampani zaseJamani zihlawula ukusebenzisa umbane
IJamani iyakwazi ukwenza izaphulelo kwityala lombane labemi bayo ngoncedo lwamandla ahlaziyekayo.
Izibonelelo ezintle zamandla ombane!
Ngumthombo ongapheliyo wamandla iintsuku ezingama-365 ngonyaka, ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, iimeko zemozulu zangoku azinampembelelo.
Izakhiwo ezinokusetyenziswa phantse kwamandla ombane
E-Spain kunendlela ende ekufuneka uhambe ngayo ukuthobela i-European Directive 2010/31 ukuze izakhiwo zakhiwe ngamandla aphezulu emandla ukusuka kwi-2020
Ekugcinweni kwamandla iibhalbhu zokukhanya sizihlela ngokokukhanya kwazo, kunye neyunithi ebizwa ngokuba yi "lumens" ebonisa ngokuchanekileyo inani lokukhanya.
Ngokunjalo iithayile zelanga ziya kugubungela izindlu kwikamva elingekude kakhulu
Ngokungafaniyo neepaneli ze-photovoltaic ezibekwe eluphahleni, iithayile zelanga zinobuhle kwaye ziphantse zisebenze ngokufana nepleyiti.
Ii-PP kunye nee-C's veto umthetho ozisebenzisela ukusetyenziswa kombane
IBhodi yeNkongolo yamkele, ngenkxaso ye-PP kunye nabemi, i-veto karhulumente kumbane ozisebenzisela wona. Ukuvela kwamandla ahlaziyekayo
I-PSOE ibongoza uRhulumente ukuba afune izisombululo kwindlala yamandla
Unobhala jikelele we-PSOE uphakamise isidingo sePact State enkulu ukuze akwazi ukulwa indlala yamandla.
Ngaba intlupheko yamandla iyafana nesifo?
Nyaka ngamnye abantu abangaphezu kwama-7.000 bayafa kumazwe apho amakhaya amabini kwali-XNUMX angenakho ukubasa ubushushu. Amandla endlala athatha ukusweleka.
UTesla uthi iibhetri kunye nelanga zibonisa indlela eya kumbane oshibhile kwiminyaka eli-10
Ukudityaniswa kwebhetri yasekhaya kunye neepaneli zelanga kuya kukhokelela kumbane oshibhile malunga neminyaka eli-10 ngokweTesla.
Ukuzimela kwamandla, ukugcinwa kwamandla ngamnye
Kubantu babucala, ukuvelisa ubuncinci bamandla abo ngenkqubo yomoya okanye iipaneli zelanga yinto elungileyo.
Imarike yefanitshala yekhadibhodi
Kungekudala, ifanitshala yekhadibhodi kunye nezinto zazingumqondiso wobunyani babanye amagcisa. Nangona kunjalo, kangangexesha elithile, kuye kwavela ifanitshala yekhadibhodi, ekulungele ukuyitshintsha ifenitshala eyakhiwe ngamaplanga.
Umsebenzi wecandelo lomoya wecandelo lomoya
Isiporho sewayini esinezixhobo zomoya sisixhobo esibaluleke kakhulu kubo bonke abo banendawo yokugcina iwayini kwaye basebenzela ukwandisa umgangatho wewayini.
Ezinye iingcebiso malunga nokufumana simahla amanzi acocekileyo
Amanzi afakiweyo afunekayo kusetyenziso oluthile lwasekhaya, njengamanzi asetyenziswa kwisinyithi somphunga, kwisityalo se-steam, okanye kwibhetri.
Amaxesha okunciphisa ukusetyenziswa kombane
Amaxesha zizixhobo ezisinceda songe amandla
Izizathu ezi-5 zokuthenga ibhayisekile yombane
Ibhayisikile yombane yindlela yothutho yendalo
Iintsalela zetamatato kunye nepepile zonyusa imveliso ye-biogas
Iintsalela zetumato kunye nepepile zonyusa imveliso ye-biogas
Ifenitshala yekhadibhodi yendalo
Ifenitshala yekhadibhodi yinto yendalo ekhayeni lethu
Ungayifaka njani imicrowave kwaye wonge amandla
Ukupheka kwi-microwave kugcina phakathi kwe-60 kunye ne-70 yeepesenti yokusetyenziswa kwamandla, ngokwe-IDAE. Kule nqaku sichaza indlela emasipheke ngayo kwi-microwave ukufumana iziphumo ezilungileyo.
Ixesha lokuhlawula lotyalo mali kumandla ahlaziyekayo
Ngaphambi kokwenza naluphi na utyalomali, omnye wemibuzo oza kuhlalutya lixesha lokubuya lotyalo mali. Kaninzi…
Ukuzenzekelayo ekhaya, ubuchule bokwenza izindlu zendalo
Ukuzenzekelayo kwasekhaya yitekhnoloji yokusika enikezela amakhaya ngentuthuzelo, ukhuseleko kunye nokonga amandla. Inezinto ezizenzekelayo zeenkonzo kunye nezinto zendlu ukulungiselela inkcitho yamandla, ukhuseleko kunye nentuthuzelo yekhaya.
Izindlu ezisetyenziselwa okusingqongileyo ukwandisa izixhobo zendalo njengesixhobo sokonga amandla, imali kunye nokwenza ulwakhiwo oluhlonipha okusingqongileyo.
Utshintsho lwesithathu kumzi mveliso lusekwe kumandla ahlaziyekayo
Iingcebiso zokukhetha iiphaneli zelanga kwindlu yethu
Njengenkxaso kunye noncedo lokonyuka kwamandla elanga, abantu abaninzi bayakhuthazwa ukuba bathenge iipaneli zelanga ...
Izizathu ezi-5 zokufaka iiphaneli zelanga ekhaya
Itekhnoloji yelanga yenye yamandla ahlaziyekayo nacocekileyo, yenye yezona ziphuhla ...
Amandla elanga anezicelo ezininzi, enye yezona zinto zincinci zenziwe kukusetyenziswa kwemisebenzi yezolimo. Obu buchwephesha…
Imveliso enobume bendalo iyaxhaphaka kuzo zonke iindawo kodwa elinye lamacandelo ...